Ahoana ny fomba fananganana banner YouTube any Canva, tsikelikely | Famoronana an-tserasera
Ny faneva YouTube no sary fonosin'ny fantsona. Matetika izy io dia ampiasaina mba hanomezana vaovao momba ilay lohahevitra, hisarihana ny saina ary hanamorana ny fahafantaran'ny mpihaino anao. Noho izany zava-dehibe ny maha solontena azy ny zavatra ataonao ao amin'ny fantsona ary ampio ireo izay tonga any hahalala izay ho hitany ao anatin'ireo horonan-tsary. Amin'ity lesona ity dia hampianariko ianao amin'ny fomba fananganana banner YouTube any Canva, mora sy tsy mila mametraka programa.
1 Fepetra faneva YouTube
2 Ampidiro ao Canva ny loharano
3 Famolavolana faneva
3.1 Ovay ny loko eo aoriana
3.2 Manampia sary na araraoty ny loharanon-karena maimaimpoana an'ny Canva
3.3 Manampia lahatsoratra ary ampifanaraho ireo singa
3.4 Diniho ny fahitana azy ao amin'ny YouTube
Fepetra faneva YouTube
Mba hisorohana azy tsy ho pixelated, tokony omenao habe 2560 x 1440 px ilay rakitra. Tsy mila mahatadidy ireo refy ireo ianao raha tsy tianao izany, raha mankany amin'ny motera fikarohana ianao ary manoratra «Cover YouTube» hiditra ianao modely hanombohana ny famolavolana ny sainanao
Azonao atao ihany koa ny mankany bokotra volomparasy eo amin'ny zoro havanana ambony milaza hoe "Mamorona endrika". Rehefa tsindrio ianao dia hisy varavarankely kely hisokatra izay tsy maintsy ampidirinao ny refy.
Ampidiro ao Canva ny loharano
Raha eo am-pamoronana ny sora-baventy ianao, dia mety efa manana mari-pahaizana hita maso ho an'ny fantsonao. Ampidiro ireo loharano anananao (logo, sary, loko ...) mankany Canva alohan'ny hanombohany mandrafitra. Na dia tsy ampiasainao amin'ny sora-baventy aza izy ireo afaka manome aingam-panahy izy ireo.
Ohatra, ny sary famantarana dia tsy mila miseho eo amin'ny sary fonon'ilay sary. Raha efa ampiasainao amin'ny sarinao mombamomba izany dia azonao atao ny manapa-kevitra ny tsy hampiasa azy io. Fa ohatra, efa fanaoko izany esory ny loko ary apetaho amin'ny ambin'ireo singa ny sainako. Raha mankany menio loko, fipihana eo afovoany ary kitiho eo amin'ny kianja eo amin'ny zoro ambony havia dia ho hitanao izany Canva dia mamoaka loko miloko avy hatrany amin'ny sary amin'izay ianao afaka mampiasa azy ireo amin'izay tianao.
Mampakatra loharano any Canva, tsy maintsy mandeha any amin'ny rahona hita ao amin'ny tontonana ianao eo ankavanana. afaka hisintona rakitra tianao any na kitiho eo "mampakatra rakitra" ary ampidiro ny sary avy amin'ny fitaovanao na avy amin'ireo sehatra miseho rehetra. Rehefa mampakatra ny zava-drehetra ianao dia vonona hanomboka hamorona!
Ovay ny loko eo aoriana
Ny zavatra voalohany hataontsika dia ovay ny loko ambadika. Hampiasa ny mavo misy ny sary famantarana aho. Hanova ny loko ambadika, tsindrio fotsiny eo dia mandehana any amin'ny efajoro ambony havia. Azonao atao ny manamboatra loko vaovao, manome ny mari-pamantarana miampy na mampiasa ny loko avy amin'ny paleta (toa ahy).
Manampia sary na araraoty ny loharanon-karena maimaimpoana an'ny Canva
Manampy be amin'ny fisintomana ny saina ny sary. Nampiakatra sary misy ambangovangony mangarahara aho, hapetrako eo afovoany ary asio sivana mainty sy fotsy hahamety kokoa ny loko misy antsika. Tsindrio ny sary, ary eo amin'ny tontonana ambony, kitiho ny «sivana» ​​ary apetaho amin'ny mainty sy fotsy ny iray. Afaka mankany «Ampifanaraho», ao amin'ilay tontonana iray ihany, ary manaova fanitsiana vitsivitsy Mba hanaovana azy araka ny itiavanao azy dia nampiakatra kely ny famirapiratako aho.
Raha tsy te hampiasa ny sarinao manokana ianao, dia ataovy foana afaka mandeha amin'ny loharanon-karena maimaim-poana ao Canva ianao. Ao amin'ny tontonana, eo ambanin'ny entana, azonao idirana sary tena mahaliana izay afaka manampy amin'ny fanomezana vaovao ambonin'ny lakandrano. Ampiasao ny motera fikarohana hanivanana azy ireo. Raha tsy tianao ny orientation dia foana azonao atao ny manodina azy, amin'ny alàlan'ny fanindriana eo aminy sy ny fihodinanao eo amin'ny tontonana ambony.
Manampia sary na fanoharana, mariho izany Ny fahitana amin'ny fitaovana rehetra dia azo antoka ihany ao amin'ny faritra afovoan'ny modely. Zava-dehibe ny farafaharatsiny farafaharatsiny amin'ny solosaina dia toa tsara, noho izany dia tokony apetrakao ireo singa ao amin'ilay faritra voafetra amin'ny sary ambony ary avelao hanakaiky ny afovoany ny zava-dehibe.
Manampia lahatsoratra ary ampifanaraho ireo singa
Aorian'ny fametrahana ny sary dia hanao manampia lahatsoratra izay manome fampahalalana momba ny atin'ny fantsona. Eo ankavanana dia hanoratra ny lohahevitra aho ary amin'ny ankavia dia hasongadiko fa manao lesona izahay. Azonao atao ny mamorona lahatsoratra manintona kokoa amin'ny alàlan'ny endriny, raha mamorona mahitsizoro ianao, apetranao eo ambony ny lahatsoratra ary omenao azy ny lokony, ianao dia hamorona ny fiheverana fa loaka amin'ny endrika izany.
Azonao atao ny manova ny habe sy ny endritsoratra ao amin'ny tontonana ambony (nampiasa ny Black File aho ary nanohy nampiasa ny lokon'ny palette logo). Tsarovy izany azonao afindra mihemotra na mandroso ireo singa ao amin'ny kiheba «position». Alohan'ny hamaranana dia alao antoka fa milahatra tsara ny zava-drehetra. ny fitaovana 'fampifanarahana' azo alaina ihany koa ao amin'ny kiheba toerana.
Diniho ny fahitana azy ao amin'ny YouTube
Vonona ianao, ampidino amin'ny endrika jpg ary andramo amin'ny fantsonao YouTube. Jereo ny fomba fijeriny amin'ny fitaovana samihafa. Ahoana ny fahitanao ny famoronana sora-baventy any Canva tena tsotra, tena ilaina ilay fitaovana ary ilaina ny mampiasa azy amin'ny lahasa hafa, toy ny fampisehoana famolavolana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fomba fananganana banner YouTube any Canva, tsikelikely